Chamasango - ZimbOriginal
April 23, 2022 February 20, 2021 by ZimbOriginal
Kare kare, kwaiva nemusha waiva nevakomana vaifarira kubata mbeva. Vakomana ava vaiteya mariva mazuva ose. Mumwe wavo ainzi Chamasango. Nguva dzose, Chamasango aibata mbeva dzakawanda kudarika vamwe vose. Rimwe zuva, vakomana vakabuda rungwanani-ngwanani kunotarisa mariva avo. Chamasango akanowana riva rake rabata Mudhende. Vachiona izvi, vakomana vose vakanongedza Chamasango vachimuseka. Zvainzi kubata Mudhende kwaishura rufu. Vakamuudza kuti auraye Mudhende asi akaramba. Chamasango akatora Mudhende ndokumuisa munhava yake.
Zuva rovira, Chamaasango akadzokera kumba. Akanoratidza amai vake Mudhende. Amai Chamasango vakaridza mhere nokuti vaifunga kuti mwana wavo akanga ava kuzofa. Vakazoti kwaari, ‘Mwanangu, unofanira kutiza rufu. Enda kunyika iri kure kure isina anokuziva.’ Chamasango akarongedza, akatora nhava naMudhende ndokuonekana naamai vake.
Chamasango akafamba kwemazuva mazhinji asingazive kwekuenda. Akatanga kuneta, kunzwa nyota, nekurumwa nenzara. Akaramba achifamba, ndokuzosvika paiva nebako. Bako iri rainge rakapfigwa nebwe guru. Akaedza kusunda ibwe riya asi akatadza. Akagara pasi ndokutanga kuchema. Achichema kudaro, ibwe riya rakakunguruka bako ndokuzaruka. Chamasango akashama nazvo. Akasimuka ndokupinda mubako, ibwe riya ndokukunguruka richidzokera pakare.
Chamasango akapinda mubako achitya. Maiva nerima guru. Akaringa-ringa ndokuona kuti bako iri raitova nyika huru. Maiva nemhuka neshiri zhinji. Mhuka idzi dzakanga dzisina mufaro. Dzaida kubuda mubako.
Chamasango akaona Chapungu ndokunotaura naye. ‘Tese takapinda muno sezvawaita,’ akadaro Chapungu. ‘Mubako muno munogara kamwe kachembere. Kachembere aka kane mwoyo wakaipa zvikuru. Ndiko kanotonga nyika ino. Kanogara mukatumba ako,’ akadaro achinongedza katumba kaiva mubako. ‘Kachembere aka kane gona rine mafuta. Mafuta aya anojekesa nekuvhura bako.’ Chamasango akati dhuu kufunga ndokubva abvunza achiti, ‘Zvino todii?’ ‘Ndine zano,’ akadaro Chapungu. ‘Tinofanira kutora gona kubva kune kachembere.’
Mudhende aiva munhava yaChamasango achinzwa zvaitaurwa. Akaburitsa musoro neparutivi penhava ndokuti kuna Chamasango, ‘Ndinoda kukubatsira, nokuti wakandipunyutsa rufu. Ndiri mudikidiki saka ndinokwanisa kupinda mukatumba ndisina anondiona. Ndinopinda ndoba gona rine mafuta. Pandinobuda mumwe anofanira kuchimbidza kunditora.’ ‘Ndinokutora ndobhururuka newe,’ akadaro Chapungu. ‘Chamasango anenge akamira pasuo rebako. Iwe Mudhende uchamukandira gona iye ozarura bako.’ Vakabva varonga musi wavaizoita izvi.
Zuva riya rakasvika. Mudhende akapinda mukatumba kekachembere. Akuba gona riya achibva atiza. Kachembere kakatadza kumubata. Chapungu akanakurira Mudhende mudenga ndokubhururuka naye. Mudhende akakandira Chamasango gona, Chamasango ndokutora mafuta akazarura bako. Mhuka dzose dzichiona izvi dzakamhanya dzichibuda mubako. Chembere yakasarira kumashure. Chamasango akabudawo mubako ndokutora mafuta akavhara bako. Kachembere kakasara kari kega mubako.
Ndipo pakafira sarungano.
© 2022 ZimbOriginal | All rights Reserved.